Warar - Macluumaad loogu talagalay xallinta qaab dhismeedka Hawada
Unugyada aasaasiga ah ee ka kooban shabakadda waa Ahraamta saddex-geesoodka ah, prisms-ka saddexagalka ah, xabadaha, Ahraamyada laba jibbaaran ee la jarjaray iyo wixii la mid ah. Cutubyadan aasaasiga ah waxaa lagu dari karaa qaab fidsan oo saddex-xagal ah, afar-geesle ah, gees-geesleyaal, goobaabin, ama qaab kale.
Waxay leedahay faa'iidooyinka culeyska booska, culeyska fudud, qalafsanaanta sare, iyo waxqabadka dhul gariirka wanaagsan; waxaa loo isticmaali karaa guri ahaan dhismayaasha sida garoomada, tiyaatarada, hoolalka carwooyinka, hoolalka sugitaanka, istaadiyada garoomada, hangaarada, qaababka shaxda weyn ee laba-geesoodka ah, iyo aqoon isweydaarsiyo, dabool.
Faa’iido darrada jirta ayaa ah in tirada ulaha ku kulmaya qanjidhada ay badan yihiin, soosaarka iyo rakibistuna way ka dhib badan yihiin qaabka qorshaha.
Waxaa loo qaybin karaa qaab-dhismeedka shaashadda nooca saxan-laba-lakab ah, hal-lakab iyo qaab-dhismeedka shaashadda nooca qolof-laba-geesood ah. Xubnaha shabakada nooca saxanka iyo shabaqa lakabka lakabka laba-lakab ayaa loo qaybiyaa chord sare, chord hoose iyo xubnaha webka, kuwaas oo inta badan xambaarsan xiisad iyo cadaadis; xubnaha shaashadda nooca lakabka qolofta keliya ah, marka lagu daro inay qaadaan xiisadda iyo cadaadiska, sidoo kale waxay qaadaan daqiiqad foorarsi ah iyo xoog xiirid.
Inta badan qaabdhismeedka shabakadda Shiinaha wuxuu qaataa qaab dhismeedka nooca saxanka.
Midka koowaadnooca wuxuu ka kooban yahay nidaamka goynta diyaaradda. Waxaa jira afar nooc oo ah laba qaybood oo isku xidha laba qaybood oo kala duwan, laba dhinac oo isku xidha laba qaybood, iyo laba dhinac oo saddex geesood ah.
Ta labaadqaybta waxay ka kooban tahay cutubyo laba jibbaaraam afar geesle ah. Waxaa jira shan nooc oo ah shabaqyo xagjir ah oo afar geesle ah oo hufan, shabaqyo wanaagsan oo afar geesle ah, shabagyo afar geesle ah oo jaantus ah, shaashad afar geesle ah oo afar geesle ah iyo shaxan xiddig qaabeeya afar geesleyaal afar geesle ah.
Ta saddexaadnooca wuxuu ka kooban yahay cutubyo Ahraam saddex-geesood ah, wuxuuna leeyahay saddex qaab: saddexda xagal ee Ahraamta, saddexda geesood ee Ahraamta ah ee la daad-gureeyay iyo shabakadda xagal-xagalka ah ee saddex-geesoodka malabka. Qaab dhismeedka shell Shell-ka wuxuu u qaybsan yahay qaab shey silsilad ah oo isku laaban, shey goobeed goos goos goos ah iyo hyperbolic parabolic dusha qolofka shaashadda qaabka sida ku xusan foomka dusha qolofka.
Qaab dhismeedka shabakadu wuxuu u qaybsan yahay shabagyo bir ah, shabaqyo la taaban karo oo la xoojiyay, iyo shabakado isku dhafan oo ka kooban bir iyo shamiito la xoojiyay iyadoo la raacayo qalabka la isticmaalay. Iyaga dhexdooda, shabakadaha birta ayaa si joogto ah loo isticmaalaa.